कैदीबन्दीले दशैं खर्च पठाए
तनहूँ, बडादशैँ नजिकिँदै गर्दा दमौली कारागारमा रहेका कैदीबन्दी घरमा दशैँ खर्च पठाउन व्यस्त छन् ।
कैदी विष्णु भुजेलले मुढा बिक्री गरेर आएको रु १५ हजार घर पठाइएको बताउनुभयो । कारागारमा बनाइएका सामग्री तनहुँ कास्की, लमजुङ, गोरखालगायत जिल्लामा बिक्री गरिँदै आएको सहलेखापाल शकुन्तला न्यौपानेले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार २५ जना क्षमताको कारागारमा नयाँ भवन थपेर ६५ जना बस्न मिल्ने बनाइएको छ । हाल कारागारमा ५३ थुनुवा र ६१ कैदीबन्दी छन् ।
प्रकाशित : बिहिबार, असोज २५, २०७५२०:३०
दशैँअघि कर्णालीमा चामल ढुवानी गरिने !
झोलाभित्र लुकाई पाँच किलो तयारी गाँजा भारततर्फ लैजाँदै गर्दा एक पक्राउ !
सामुदायिक वनमा संकटापन्न सालकको उपस्थिति राम्रो ! बढ्यो सालकको संख्या !
ठेक्का भएको वर्षौं हुँदा पनि काम भने अलपत्र: मध्यपहाडी राजमार्गमा तीन पुलको काम भएन !
पश्चिमी वायुको प्रभावले तीन दिनसम्म बदली हुन सक्ने ! यस्तो छ तीन दिनको मौसम अनुमान !